Xildhibaano shuruud adag hor-dhigay Madaxweynaha Hir-Shabeelle - Awdinle Online
Xildhibaano shuruud adag hor-dhigay Madaxweynaha Hir-Shabeelle
Maanta ayaa waxaa la filayaa in Magaalada Jowhar inay kulan ku yeeshaan Madaxweynaha Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen & Xildhibaannada Hir-Shabeelle kuwa kasoo jeeda gobolka Hiiraan, iyaga oo ka wada hadli doona Arrimaha kajira Gobolka Hiiraan.
Xalay kulan gaar ah oo ay jowhar ku yeesheen Xildhibaannada Hir-Shabeelle ee kasoo jeeda gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay ku go’aamiyeen in madaxweyne cali guudlaawe inay kala hadlaan in wax laga qabto xaalada kajira Gobolka Hiiraan.
Sidoo kale Xildhibaannada ayaa waxaa ay sheegeen in aan loo dul qaadan Karin waxa ka socda Magaalada Beledweyne, iyaga oo dalbaday in si shuruud la’aan ah lagu siidaayo dad xirxiran.
Xildhibaannada ayaa waxaa ay soo saareen dhwor qodob oo ay kala hadli doonaan Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hir-Shabeelle, kuwaas oo kala ah.
1) in lasii daayo dadka xirxiran si sharuud la’aan ah
2) in aan qof dambe loo xirin arrimo la xariiro dooda Hirshabeelle
3) In Madaxwayne kuxigeenka Hir-Shabeelle iyo dhamaan Xildhibaanada joogo Baledwayne in ay si dhaqsi ah u yimaadaan Jowhar si looga wada hadlo arrimaha leysku heysto.
Lama oga waxa kasoo bixi kara Kulanka ay yeelan doonaan Madaxweynaha Hir-Shabeelle iyo xildhibaannada kasoo jeeda gobolka Hiiraan, iyada oo dad horleh xalay lagu xiray Magaalada Beledweyne.
Previous articleDaawo: Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo faah faahiyay sababta uu uga baaqday Shirka Garoowe
Next articleDEG DEG:- Qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay duleedka Muqdisho